Noely | FKMP
TERAKA NY MPAMONJY
Tonga ny fotoana nandrasantsika mianakavy. Mifaly isika kristianina miara-miredona ny hira fiderana manakoako ataon’ny Anjely hoe : VONINAHITRA HO AN’ANDRIAMANITRA… Mankalaza izany ara-pomba litorizika manetriketrika. Mitotorebika avy eo ny mpianakavy sy miara-misakafo. Fety akaiky antsika olombelona tokoa ny Noely satria resaka fahaterahana. Efa noresahantsika fa tamin’ny taonjato faha-4 no nandraiketana ny 25 Desambra ho fankalazana ny Noely.
Ahoana izany no fankalazan’ny Fiangonana ny Noely ?
Lamesa telo lehibe no ankalazaina, tsy zatra ny maro amin’ilay Sorona Masina Mialoha (hariva).
Sorona Masina Misasakalina
Sorona Masina Maraina
Sorona Masina Antoandro
Dia inona izany no tian’ny Fiangonana ampitaina sy ho dinihantsika ?
Tsara isika mihaino tsara ny toriteny ampitain’ny Pretra amintsika fa ifaharan’ny finoanatsika izany amin’izao fotoan-dehibe izao. Fetim-pitiavana ny fetin’ny Noely. Fetin’ny fitiavan’Andriamanitra ny olona rehetra tsy misy avakavaka.
Fa ahoana izany ny amin’ny Litorizia ?
Izao no mba tsara ho fantatrao : Vakiteny Masina mitovy daholo no vakiana fa tsy misy taona A B D akory. Mifono hevitra lalina eo amin’ny Litorizia izany.
Sorona Masina Misasakalina : Fandresena miezinezin’Ilay KRISTY FAHAZAVANA, ka ny Anjely no miredona ny Voninahitra ho an’Andriamanitra.
Sorona Masina Maraina : Indro isika mirohatra ampanetren-tena miaraka amin’ny Mpiandry ondry handray ilay JESOA FIAINAM-BAOVAO, nentin’ity Zanak’Andriamanitra ity.
Sorona Masina Antoandro : Miatrika Ilay Misterin’ny Fahatongavana ho Nofo isika. I JESOA TENY TONGA NOFO, no nanome hasiny sy vidiny ny maha-olombelona. Isika olombelona mba ho tonga zanak’Andriamanitra koa. Izany no zava-dalina, Vaovao Mahafaly entin’ny Fivavahana Kristianina. Ka aza mandraraka ilo mby an-doha.
Dia samy ho tatran’ny Noely daholo e.
(Isantokantrano N° 174)